Tag: nyora | Martech Zone
Kana iwe wanga uri muverengi we Martech Zone kwechinguva, iwe unoziva kuti ini ndaigona kushandisa zvakati wandei rubatsiro mubazi rekupepeta. Hazvirevi kuti ini handina basa nezviperengo uye girama, ndinoita. Dambudziko rinowanzo kuve retsika. Kwemakore, ndanga ndichinyora nekutsikisa zvinyorwa zvedu pamhepo. Ivo havapfuure nematanho mazhinji ekubvumidzwa - ivo vanoongororwa, akanyorwa, uye akatsikiswa. Nehurombo, izvo zvakakonzera ini
Maitiro Akanakisa ePost uye Mamiriro Ekumisikidza Mafomu
Muvhuro, June 9, 2014 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2015 Douglas Karr
Handina chokwadi chekuti ndingadai ndakadaidza iyi infographic Maitiro Ekugadzira Akanaka Mapositi; zvisinei, zvine kumwe kujekesa kukuru pane izvo zvakanaka maitiro anoshanda ekuvandudza yako blog, vhidhiyo uye magariro masosi pamhepo. Iyi ndiyo yechina iteration yeavo anozivikanwa infographic - uye inowedzera mukublogi uye vhidhiyo. Kushandiswa kwemifananidzo, kufona-ku-kuita, kusimudzira munharaunda uye ma hashtag izano rakakura uye kazhinji rinofuratirwa sevashambadzi vanongoshanda kushambadzira zvirimo. Ini